Ahoana ny fanovana kisary fampiharana amin'ny iPhone | iPhone News
Ahoana ny fanovana ny kisary fampiharana amin'ny iPhone
Ignatius Room | 10/04/2022 12:00 | iPhone, Fampianarana sy torolàlana
Hanova ny kisary fampiharana amin'ny iPhone Izy io dia ahafahantsika manome ny iPhone amin'ny alàlan'ny personalization izay, mandra-pahatongan'ny iOS 14, dia tsy nisy afa-tsy tamin'ny rindranasa vitsivitsy izay nanolotra an'io safidy io.
Raha leo ianao jereo foana ny kisary mitovy ao amin'ny WhatsApp, Safari, Telegram, Notes, ny fampiharana ny bankinao... ato amin'ity lahatsoratra ity dia asehontsika anao ny dingana rehetra tokony harahina hanovana ny kisary amin'ny fampiharana amin'ny iPhone.
2 Hanova ny kisary fampiharana amin'ny iPhone amin'ny fampiharana Shortcuts
3 Hanova ny kisary fampiharana amin'ny iPhone miaraka amin'ny fampiharana hafa
3.1 Ahoana ny fiasan'ny Widget sary: ​​Tsotra
3.2 Hanova ny kisary fampiharana amin'ny iPhone miaraka amin'ny Widget sary: ​​Tsotra
4 Ahoana ny fanesorana ireo kisary amin'ireo rindranasa napetrakay
5 Aiza no hisintonana kisary ho an'ny iOS
Voalohany indrindra, tokony ho fantatsika ny fomba fiasa sy ny dikan'ny fanovana ny kisary fampiharana. Raha ny marina, Apple dia tsy mamela antsika hanova ny kisary ny fampiharana.
Inona no mamela antsika, amin'ny alalan'ny fampiharana Shortcuts, dia ny mamorona hitsin-dàlana mankany amin'ny fampiharana iray mampiasa ny sary na kisary izay tiantsika.
Inona no dikan'izany? Ho an'ny hitsin-dàlana tsirairay noforoninay amin'ny rindranasa iray, dia hanana kisary roa hidirana amin'ilay rindranasa isika: ny hitsin-dàlana noforoninay sy ny kisary fampiharana.
Ny vahaolana amin'ity olana ity dia ny mamorona lahatahiry misy mifindra kisary fampiharana tany am-boalohany ary avelao ny kisary vaovao noforoninay eo amin'ny desktop manaraka ny dingana asehoko anao amin'ity lahatsoratra ity.
Ao amin'ny App Store dia afaka mahita fampiharana samihafa manolotra antsika isika kisary manokana napetraka eo akaikiny fondos de pantalla hamorona lohahevitra. Ny sasany amin'ireo fampiharana ireo ihany koa misy widgets izay mitambatra amin'ny sary masina sy amin'ny wallpaper.
Hanova ny kisary fampiharana amin'ny iPhone amin'ny fampiharana Shortcuts
Araka ny efa nolazaiko teo ambony, raha hanova ny kisary amin'ny fampiharana amin'ny iPhone dia tsy maintsy mampiasa ny fampiharana Shortcuts isika, fampiharana izay raha tsy apetrakao dia azonao atao. Ampidino maimaim-poana amin'ny alàlan'ny rohy manaraka.
Rehefa nametraka ny fampiharana izahay dia manokatra ny fampiharana ary araho ny dingana asehoko anao eto ambany:
Tsindrio ny + sonia hita eo amin'ny zoro ambony havanana amin'ny fampiharana.
Manaraka, manoratra ny anarana hitsin-dàlana.
Manaraka, tsindrio eo Manampia hetsika ary ao anaty boaty fikarohana no soratanay misokatra ny app, mifidy ny valiny aseho ao amin'ny fizarana soratra.
Amin'ny dingana manaraka, tsindrio ny lahatsoratra App ary misafidy izay fampiharana tiana hosokafana.
Manaraka, tsindrio ny 4 andalana marindrano hita eo amin'ny zoro havanana ambony ary safidio Ampio amin'ny efijery an-trano.
Amin'ny varavarankely manaraka tsindrio eo amin'ny logo voafaritra mialoha ny fidirana mivantana ary avy eo ao Safidio ny sary hisafidianana ny sary tiantsika hampiasaina. Afaka mikaroka ny sary amin'ny fitaovantsika ihany koa isika na maka sary.
Farany, manindry izahay hametraka.
Eo amin'ny efijery an-trano, hisy hitsin-dàlana ho noforonina miaraka amin'ny sary nofidintsika izay mampandeha WhatsApp. Ankehitriny dia tsy maintsy Alefaso any amin'ny lahatahiry iray ny app whatsapp fa kosa, ampiasao ny hitsin-dàlana noforoninay.
Hanova ny kisary fampiharana amin'ny iPhone miaraka amin'ny fampiharana hafa
Ny fampiharana izay hampiasainay hanovana ny kisary fampiharana, ny wallpaper ary ny widgets mba hanarahany ny endrika mitovy. Widget sary: ​​Tsotra.
Miaraka amin'ity fampiharana ity ny dingana hanovana ny kisary amin'ny fampiharana amin'ny iPhone dia haingana kokoa, satria atao miaraka amin'ny rafitra izany fa tsy tsirairay toy ny amin'ny fampiharana Shortcuts.
Photo Widget: Tsotra, fampiharana azonay atao misintona maimaimpoana. Afaka mampiasa ny app isika tsy misy karazana fetra ho takalon'ny fahitana dokaKa mandoa 22,99 euros hanesorana azy ireo tanteraka.
Ity fampiharana ity dia havaozina tsindraindray manampy lohahevitra vaovao miankina amin'ny fotoanan'ny taona misy antsika.
Widget sary : Tsotramaimaim-poana
Raha tsy mahafeno ny filantsika ity fampiharana ity dia afaka misafidy ny safidy azo alaina ao amin'ny App Store izahay, raha mbola vonona izahay handoa ny famandrihana atolony.
Ahoana ny fiasan'ny Widget sary: ​​Tsotra
Ny fampiharana Widget sary: ​​Tsotra miasa amin'ny alalan'ny profil. Vantany vao nisafidy ny endrika (kisary, wallpaper ary widget) izay tiantsika hampiasaina isika, dia hanasa antsika hisintona mombamomba amin'ny iPhone ny fampiharana.
Raha vao mametraka ny mombamomba ny fitaovana, ny efijery dia hampiseho ny kisary amin'ny fampiharana rehetra miaraka amin'ireo voalohany. Raha esorinay ny mombamomba azy dia esorina ao amin'ilay fitaovana ireo kisary vaovao mifandraika amin'io lohahevitra io.
Hanova ny kisary fampiharana amin'ny iPhone miaraka amin'ny Widget sary: ​​Tsotra
Rehefa avy nisintona sy nametraka ny fampiharana izahay dia manokatra izany ary mandehana any amin'ny ambany izay ahitana ny safidy rehetra atolony antsika:
Lohahevitra. Ity fizarana ity dia mampiseho andiana kisary ampiasaina amin'ny iPhone.
Widget. Ao amin'ny fizarana Widget, mahita widgets mifanandrify amin'ireo lohahevitra kisary misy ao amin'ny fizarana Lohahevitra isika.
Item. Ao anatin'ny Item, ny wallpaper mifanandrify dia aseho miaraka amin'ireo kisary misy ao amin'ny fizarana Lohahevitra, Icon Packs ary Fonts.
My. Ao amin'ny fizarana My, ny atiny manokana noforoninay hampiasaina amin'ny fampiharana dia voatahiry.
Satria ny tiantsika dia ny manova ny kisary amin'ny fampiharana iPhone, tsindrio ny Lohahevitra ary mandehandeha eo anelanelan'ireo sary samihafa izay mampiseho antsika ny fomba fijerin'ny iPhone amin'ny andian-kisary tsirairay.
Rehefa hitanay ilay fonosana kisary izay tiana indrindra dia tsindrio izany mijery sary lehibe.
Manaraka, tsindrio eo Tehirizo aorian'ny doka (ad).
dia hisokatra ny varavarankelin'ny fikirakirana lohahevitra. Amin'ity varavarankely ity dia afaka manamboatra:
Wallpaper. Kitiho ny Save mba ho voatahiry ao amin'ny rindranasa Sary ny sarin'ny lohahevitra ary afaka mampiasa azy io ho wallpaper.
Widget. Rehefa manindry ny Save dia hotehirizina ny widget izay aseho mba ho azo ampiasaina amin'ny efijery an-trano amin'ny fitaovantsika. Afaka mamorona widgets vaovao isika ao amin'ny fizarana Items.
sary Masina. Ity fizarana ity dia mampiseho ny kisary fampiharana amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny kisary hosoloana azy. Ity fizarana ity dia ahafahantsika manaisotra ny fanovana izay tsy tiantsika ary manamarika ny hafa tsy voamarika amin'ny alàlan'ny default.
Kisary manokana. Amin'ity fizarana farany ity dia afaka mamela antsika hampiasa ny sary rehetra voatahiry ao amin'ny tranomboky ho toy ny kisary fampiharana (hetsika izay azontsika atao koa amin'ny fampiharana Shortcuts).
Rehefa vita ny dingana rehetra dia tsindrio ny Mametraka kisary XX, izay ny XX dia ny isan'ny kisary fampiharana izay hosoloina ny kisary.
Ao amin'ny varavarankely manaraka, tsindrio ny bokotra Download Profile.
dia hisokatra ny varavarankelin'ny navigateur, izay tsy maintsy tsindrio eo mamela.
Farany dia misy varavarankely iray aseho izay hanasana antsika ampiasao ny mombamomba nalainay.
Ankehitriny dia tsy maintsy mametraka ny mombamomba izay nalainay izahay. Ity mombamomba ity dia hampiseho ireo kisary vaovao rehetra eo amin'ny efijerin'ny fitaovanay. Mba hametrahana azy dia miditra izahay Settings> Profile alaina> Install> Install.
Raha tsy aseho ny safidy Nesorina ny mombamomba, manaraka ity lalana manaraka ity izahay: Settings> General> VPN & fitantanana fitaovana> mivadika.
Manaraka, mandeha any amin'ny rindranasa Photos izahay ary ampiasao ny sary nalainay tamin'ny rindranasa ho Wallpaper (tsindrio ny bokotra fizarana ary safidio Wallpaper)
Farany, tonga ny fotoana ampio widgets mifototra amin'ny lohahevitra. Ny dingana dia mitovy amin'ny fametrahana widget hafa fa amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny widget avy amin'ny fampiharana Photo Widget: Tsotra.
Ankehitriny, tsy maintsy Alefaso any amin'ny lahatahiry iray ny fampiharana voalohany rehetra ary manomboka mampiasa ireo hitsin-dàlana noforonina. Raha tsy tianao ny zava-nitranga, dia mila mamafa fotsiny ny mombamomba napetrakao ianao.
Ny fampiharana mamela antsika hametraka profil samihafa hanambatra endrika kisary sy widget samihafa.
Ahoana ny fanesorana ireo kisary amin'ireo rindranasa napetrakay
Raha leo ny lafiny vaovao asehon'ny iPhone na tsy araka ny nantenainay izahay, hanesorana ireo kisary vaovao rehetra, tsy maintsy mamafa ny mombamomba izay napetratsika fotsiny isika (rehefa mamafa ny mombamomba dia ny hitsin-dàlana noforonina miaraka amin'ny mombamomba no ho voafafa fa tsy ny fampiharana).
Para vonoy ny mombamomba, tsy maintsy manao ireto dingana manaraka ireto isika:
Miditra amin'ny Fikirana amin'ny fitaovanay ary avy eo ao General.
Manaraka, tsindrio eo VPN sy fitantanana fitaovana ary avy eo miditra ambony ambany.
Aiza no hisintonana kisary ho an'ny iOS
Raha tianao izany manova ny kisary fampiharana izay matetika ampiasainao amin'ny hafa mitovy amin'izany, dia tokony hijery ny tranonkala ianao macOS Apps kisary.
Amin'ity tranokala ity dia ho hitanao kisary maherin'ny 12.000 isan-karazany, na iOS sy macOS, fampiharana Windows ary Android ary azo alaina maimaim-poana tanteraka izy ireo.
Ny kisary rehetra dia sokajiana ho sokajy ary, ho fanampin'izany, mamela antsika hanao fikarohana amin'ny anaran'ny fampiharana na rafitra miasa.
Ny sarin'ny se misintona mivantana amin'ny endrika .icns amin'ny fampiharana Photos.
Tranonkala mahaliana iray hafa ho an'ny misintona fonosana kisary mba hampifanaraka ny fampiharana amin'ny iPhone, hitanay ao kisary fisaka. Na dia ilaina aza ny fisoratana anarana mba hisintonana ireo kisary dia maro no azo maimaim-poana.
Ireo sary masina dia alaina amin'ny endrika .png, ka hotehirizina mivantana ao amin'ny app Photos.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fanovana ny kisary fampiharana amin'ny iPhone
iOS 16 sy watchOS 9 dia mety ho kintana vaovao amin'ny WWDC 2022
Ny AirPods Pro andiany faharoa dia hahita ny hazavana amin'ny faran'ny taona 2022